Landis ဆိုတာဘာလဲ? - စက်ဘီး
အဓိက > စက်ဘီး > Landis စက်ဘီး - ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမလဲ
Landis စက်ဘီး - ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမလဲ
Floyd LandisPennsylvania ပြည်နယ်၊ Lancaster ကောင်တီ၊ Farmersville တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။Landisတစ် ဦး Mennonite ဆောင်ခဲ့နှင့်သူ၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချွေးဘောင်းဘီရှည်ကိုဝတ်ဆင်သည်သူ၏ပထမ ဦး ဆုံးလူမျိုးစီးခဲ့သည်ဘာသာတရားဘောင်းဘီတို ၀ တ်ဆင်ခြင်းကိုတားမြစ်ခြင်း၊ သူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အနိုင်ရLandisဖခင်ဖြစ်သူသည်ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသောမဲန္နနိုက်ဖြစ်ပြီးသူသည်ထပ်မံအိမ်မှုကိစ္စများပေးခြင်းအားဖြင့်စက်ဘီးစီးခြင်းကိုမပြေးရန်တားဆီးခဲ့သည်။
သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၏အစမှာတကယ့်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။ သင်ဟာကြီးမားတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်မရမချင်း၊ သင်လက်မှတ်ထိုးခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏ဇာတ်လမ်းအစကဲ့သို့သောအရာများမလုပ်မချင်းဤအရာအားလုံးသည်ရှေ့ပြေးနိမိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လူများသည်တေးဂီတပြုလုပ်ရန်ကိရိယာများကြောင့်ယနေ့ခေတ်တွင်စဉ်းစားနေကြောင်းလူတို့မသိကြသောကြောင့် လူတိုင်းကမင်းတို့သိတဲ့ကြယ်ကြီးကြီး၊ နောက်ပန့်ခ်နည်းနည်း၊ နောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့ရက်ပ်ပါလို့လူတိုင်းကထင်နေကြတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကအသံကျယ်ကျယ်ဖွင့်ပြီးကျပန်းပေါက်ကွဲခဲ့တာပဲ။ ဒါပေမယ့်လူအများစုကမင်းကြိုတင်သိထားသင့်တဲ့ဘယ်လောက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာလူအများစုမသိခဲ့ဘူး။ သူ၏ရွှေသီချင်းဖြစ်သော City of Angels ဖြင့်ဆောင်းပါးပေါင်း ၃၀၀,၀၀၀ ကျော်ပါ ၀ င်သော tick-tock ပလက်ဖောင်းကိုလွှဲပြောင်းယူလိမ့်မည်။ ၂၄ သည်သူ၏အောင်မြင်မှုရှိသောဂီတလုပ်ငန်းကိုရွှေမချမီ Instagram ကို ၃၇၃,၀၀၀ ကျော်မှ Instagram တွင်နောက်လိုက် ၃၇၇၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ Youtube ကို ၀ ယ်ယူသူ ၃၆.၆၀၀၀ နောက်လိုက်များ၊ Soundcloud မှနောက်လိုက် ၂.၁ သန်းမျှသော Tick Tock zum မှနောက်လိုက်များဒီမှတ်တမ်းတင်ခြင်းမှအချိန်ကာလသည်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းကပင်ကိုယ်စွမ်းရည်ရှိသောကလေးတစ်ယောက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောဂီတပရိတ်သတ်များကိုရှာဖွေနေသည်။ Shifif ကလွှမ်းမိုးသောဂီတအလုပ်အမှုဆောင် barry ၏ရုံးခန်းကိုရှရစ်ဖ်ကသိသည်နှင့်တပြိုင်နက်သူတို့၏အစစ်အမှန်အသက်ကိုဖြတ်သန်းရန်မျှော်လင့်ချက်နှင့်ထိုမျိုးဆက်အတွက်ပွဲစဉ် ၂၄ Goldenis သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Soundcloud တွင် iPhone နှင့် Balling ကဲ့သို့သောအသံများဖြင့်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နုပျိုသောဥာဏ်ရည်၊ ဆွဲဆောင်မှုနှင့်ဂီတသည်နားထောင်ခြင်းသည်မိနစ် ၃၀ အကြာတွင်သူသည်ငါ့ကို llc llc Barry Weiss နှင့်စာချုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ သူသည်သင်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူနှင့်စာချုပ်ချုပ်ရန်ကြိုးစားသည်၊ လာမည့်တနင်္လာနေ့တွင်ပျံသန်းသော်လည်းရွှေသည်ဝေးကွာ။ သူသည်စီအီးအို၏မဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်ဖြင့်သူ၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကို ဦး ဆောင်နေပြီဖြစ်သည်။ ယခု tick-tock ကိုပထမဆုံးအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ရွှေဖြစ်သည်။ သူ၏စီမံခန့်ခွဲမှု၏ဆန္ဒနှင့်အညီဆန့်ကျင်သောအရာသည်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။
ယခုတွင်ထိုလူတွင်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်နောက်လိုက် ၂ သန်းကျော်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အခြားပလက်ဖောင်းများထက်ပရိသတ်များပိုများသည်။ ဒီတော့ရွှေသည်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှဂုဏ်ထူးဆောင်ကျောင်းသားတစ် ဦး အဖြစ်မှလာမည့်ကြီးမားသောအရာသို့မည်သို့သွားခဲ့သနည်း။ ကောင်းပြီ၊ ငါတို့ဒီမှာလုပ်နေတာ၊ ဒါဆိုငါတို့အံ့သြစရာကောင်းတာတွေကိုမင်းကိုပြောမယ်၊ မင်းတို့ရဲ့ Boymichael ဟာနာမည်ကြီးဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်တစ်ခုနဲ့ထပ်ခါထပ်ခါပြန်လာခဲ့တာပါပဲ။
ဤသည်မှာ ၂၄ ရွှေမြင့်တက်နေသောကြယ်ကိုယခုအခါ City of Angels ဖြင့်ကြည့်နေပြီး၎င်းသည်စင်မြင့်တစ်ခုလုံးအတွက်ဓမ္မသီချင်းဖြစ်လာသည်။ ကောင်းပြီ။ သူ့လာမယ့်ဇာတ်လမ်းကိုကြည့်ဖို့အရင်ကထက်ပိုကောင်းတဲ့အချိန်မရှိဘူးလို့ငါတို့ထင်ခဲ့တယ်။ ဒီတော့အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်တွေထဲမှာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိခွင့်ပေးပါ။ မိတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်နို ၀ င်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့မှာရွှေရောင်ပြောင်းသွားတဲ့ခေါင်းလောင်းကို ၀ င်ပြီးသေချာပေါက်ရိုက်နှက်ပါ။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး၊ ရွှေရောင်မြေကွက်များဖြင့်မွေးဖွားလာခဲ့ပြီး၊ အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်လူသိများသောရပ်ကွက်တစ်ခုတွင်ဤကဲ့သို့သောနာမည်မျိုးကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဘများသည်သူအားအမြဲတမ်းအလုပ်များနေရန်နှင့်လမ်းပေါ်မှထွက်ခွာရန်အခြားအရာများနှင့်အလုပ်များနေစေရန်နှင့် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင်နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်များနှင့်တူသော Lakeview တွင်ကြီးပြင်းလာပြီးကျွန်ုပ်၏မိဘများသည်ကျွန်ုပ်အားအလုပ်များသောအရာတစ်ခုခုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်အလုပ်များနေရန်အလွန်ကောင်းသည်။ သင်သိသောကြောင့်ငါကကလေးများ၏ပုံမှန်ပုံပြင်နှင့်အကျွမ်းတဝင်မရှိသော်လည်း၊ ငါဟာအမြဲတမ်းကျောင်းမှာရှိခဲ့ဖူးပြီးကျောင်းပြီးရင်ငါလုပ်ခဲ့တာတွေ၊ ကခုန်ခြင်း၊ သီဆိုခြင်း၊ ဆောင်းပါးဂိမ်းများကိုကစားခြင်း၊ သင်သိတဲ့အတိုင်းငွေရှာခြင်း၊ ဖိနပ်များရောင်းချခြင်းနှင့်မိဘများအနေဖြင့်သူတို့ဟာဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းမှာမော်ဒယ်များ၊ သူမသည်ငယ်ရွယ်စဉ်ကသရုပ်ဆောင်မှုအတွက်ရွှေကိုဘွတ်ကင်လုပ်ခဲ့ပြီးယခုသူသည် Lunchables Honda နှင့် Blue Diamond Mandels တို့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာကိုစတင်ခဲ့သည်။ သူသည်ငယ်စဉ်ကကမ္ဘာသို့ခရီးထွက်ခဲ့ပြီးနောက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောသူ၏မိဘများကဂီတတွင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ သူသည် Black Eyed Peas Akon နှင့် Kanye West ကဲ့သို့သောထူးခြားသည့်လုပ်ရပ်များကိုယခုသူနားထောင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်အမေအားကျွန်ုပ်အားလုံးကြည့်ရှုမည်ဟု Michael Jackson ၏ Greatest Hits ဂီတဆောင်းပါးများ၏ VHS တွင်တင်ထားသည်ကိုကျွန်ုပ်ကောင်းစွာသတိရမိသည်။ , ငါ့အဖေ Davis ကမိုင်ပေါင်းများစွာကစားခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဂီတနှင့်ခေတ်၏ဘုတ်စတိုင်များနှင့်ပတ်သက်။ အလွန်လျှပ်စစ်။ ယခု Drake သည်ငယ်စဉ်ကပင်နောက်ထပ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ Heavy.com Drake သည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံး rapper ကြီးထွားလာဆဲဖြစ်သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံးရက်ပ်ပါ။ သူသည်ကျွန်ုပ်ကိုတေးဂီတထဲ ၀ င်စေခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည် Rocky နှင့် Theasap Mob ASAP ကိုစွန့်လွှတ်ရမည်။ အလယ်တန်းကျောင်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်းများတွင်ရွှေသွားစဉ်မျိုးဆက်များအတွက်ရက်ပ်အေးအေးဆေးဆေးပြုလုပ်ခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူပြီးသူ၏ကျောင်းသံစုံတီးဝိုင်းအနေဖြင့်နှစ်အနည်းငယ်ကြာအောင်အသုံးချမည်ဖြစ်ပြီးတေးဂီတဖြင့်၎င်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတန်ဖိုးများနှင့်ပိုမိုကြီးမားသောအရေးပါမှုကိုစတင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သူ၏လူမှုဘ ၀ တွင်ယခုအခါလူမှုရေးဆိုင်ရာလေ့လာမှုများသည်သူ၏အကြိုက်ဆုံးလူတန်းစားဖြစ်သည်။ သူသည်ယူနိုက်တက်စတိတ်ကိုဖွဲ့စည်းထားသောမတူကွဲပြားသောယဉ်ကျေးမှုကိုပြတင်းပေါက်တစ်ခု ဖန်တီး၍ ၎င်းသည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်သမိုင်းနှင့်ကော့ပိုရေးရာကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အာဖရိက - ဘရာဇီးကိုယ်ခံပညာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်သော်လည်းခက်ခဲသောလမ်းကိုမရှာဖွေချင်ပါ။ အစောပိုင်းပြန်လည်ဖြစ်ပွါးခဲ့သောအလိုဆန္ဒဂျော်ဒန်သည်သူ၏မိဘများကငြင်းဆန်သောစနီကာစွဲစွဲလမ်းမှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ စပွန်ဆာသည်ရွှေဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူသည်မိမိကိုယ်ကိုဖိနပ်များရောင်းချခြင်းနှင့်ပြန်လည်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့သည်။ သူသည်ရွှေရောင်တေးဂီတကိုလွှဲပြောင်းယူရန်အခြားအပင်များရှိခဲ့ပြီးယခုပြန်လည်ရောင်းချခြင်း၏ဘေးထွက်ရှိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဂါထာကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ USC မှစီးပွားရေးပညာသင်ကြားမှုသည်အဆင်ပြေသော်လည်း hedge ရန်ပုံငွေမန်နေဂျာဖြစ်လိုသော်လည်း၊ ထိုအချိန်တွင်သူသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ပထမဆုံးကြယ်ပွင့်ကိုစတင်တက်လှမ်းခဲ့ပြီးအင်တာနက်ပေါ်တွင်စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ သူသည် youtube တွင်စတင်သည်။ သူသည်စတူဒီယိုတွင်သူ့ကိုသုံးသောစက္ကူကောင်လေးနှင့်အဆက်အသွယ်ရခဲ့သည်။ တေးဂီတအချို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်သူသည် ထိုအချိန်မှစ၍ တင်းကျပ်စွာပိတ်ထားသည့်လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ ငါလုပ်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးသီချင်းကို kiss boy လို့ခေါ်တယ်။ မင်းကအဲဒါကိုမတွေ့တော့ဘူး၊ အဲဒါကငါ့အသံအသံကျယ်မှာသီးသန့်ပိုင်ဆိုင်တယ်၊ သီချင်း ၁၂၀၀ လောက်ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကပထမသီချင်းတိုင်းကအကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသင်သိသလိုပဲ ငါ့ဒုတိယသီချင်းကိုငါ့ရဲ့ပထမဆုံးသီချင်းထက်အများကြီးပိုကောင်းတဲ့ပထမ ဦး ဆုံးသီချင်းဖြစ်ချင်စေချင်တယ်၊ Shaquilleo'neal ရဲ့သား Ballin Like Sharif နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူရဲ့သီချင်းဟာ djbooth.net ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာသူရေးသားခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူကနာမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားခဲ့တယ်။ အရေးပါမှုအတွက်ရရှိခဲ့သည်။
သူကဒီ Soundcloud အဆိုတော်တွေကိုကြားခဲ့ရသလိုမျိုးသူမပြောခဲ့တဲ့နောက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးပြီးနောက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့တယ်။ ရှာရီဖ်လိုငါ့သီချင်းနှောင်ကြိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမကြိုက်တဲ့သီချင်းအားလုံးထဲကဒီဟာကငါထင်တာပဲ။ ဒါပေမယ့်သူကဒီသီချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တူတယ်။ ဒီ ၂၄ ကီလိုရွှေက ၂၄ ကီလိုရွှေကရွှေဖြူထွက်ပြေးသွားမှာသေချာတယ်။ သူနဲ့အတူရှိတုန်းကသူရောက်တဲ့အခါမှာလုပ်ဖို့မဟာစီမံကိန်းတစ်ခုချမှတ်လိုက်တယ်။ ပို။ ပင်လူသိရှင်ကြားနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းရှိကျောင်းဝင်းအပေါ်ရှိသူ၏ဂီတထွက်ရ။ ငါဒီအမှားတွေကိုအခြေခံပြီးဒီအစေးကပ်တွေကိုလုပ်တယ်၊ ခွေးရဲ့အရုပ်ဆိုးတဲ့သားလေးကအရမ်းပူတယ်၊ ငါလုပ်ခဲ့သမျှ၊ ငါလုပ်တယ်၊ ဒီရုပ်ဆိုးတဲ့သားကအရမ်းပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုလေးစားပြီးငါမျက်နှာကိုတင်လိုက်တယ်။ အဲဒီမှာကျွန်တော်ကသူတို့ကိုကျောင်းဝင်းထဲမှာပစ်ချလိုက်ပြီးအားလုံးကဒီလူကြိုက်များတဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့စူပါအရုပ်ဆိုးတာပဲ။ ပြီးတော့သူကအရင်ဂီတကိုထုတ်လုပ်သူ da ၏ထုတ်လုပ်မှု၏အကူအညီဖြင့်သင်မည်သို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်ကိုပြသခဲ့သည်။ သူ၏ပထမဆုံးစံချိန်တင်သဘောတူညီချက်နှင့်စက္ကူယောက်ျားလေးများ၏ ဆက်လက်၍ လမ်းညွှန်မှုကိုပြသနေသည့် Dominic သည် ၂၄ ရွှေကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကထုတ်လုပ်ခဲ့သော Valentino သီချင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ယခုတွင် Spotify တွင်သန်း ၁၀၀ ကျော်ပြသခဲ့သည်။ ။ သူသည်ထိုအချိန်တွင်သူသည်သူ၏ပွဲ ဦး ထွက် EP ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယခုတွင်ရှိပြီးနောက်ပြီးခဲ့သည့်နိုဝင်ဘာလကကောလိပ်မှထွက်ခွာခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာငါခေါင်းစဉ်နှင့်ဝေးနေသည်ဟုထင်ရသည်၊ သို့သော်ရင်ဆိုင်ကြရအောင်၊ နောက်ပြန်မလှည့်ဘဲငါဆိုလိုတာကငရဲသည်သူမည်သည့်နေရာသို့သွားရမည်နည်းဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ သူမ theavy.com ကိုပြောတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်၊ ငါ့ရဲ့ဂီတကငါစိတ်အားထက်သန်တယ်။ ဂီတကိုဘုရားသခင်ဖန်တီးတာကိုနှစ်သက်ရတာကငါ့အတွက်ဂီတကောင်းကောင်းဖြစ်အောင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်။ ငါဒါကိုပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ ဒါကြောင့်ငါလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ရှိတယ်။ ဂီတကငါကဂီတကိုမလုပ်ရင်ကမ္ဘာကြီးအတွက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲတွေလိုစိတ် ၀ င်စားစရာများများစားစား။ ငါ့ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာကိုဖန်တီးချင်တယ်။ ရွှေရုပ်ရှင်ပုံစံ ၂၄ မျိုးဖြစ်ချင်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုစားချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရှုထောင့်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားနေတဲ့ဖက်ရှင်တစ်ခုကဒီဟာကငါလုပ်ချင်တာပဲ၊ ငါ့ရဲ့ဂီတကိုငါလုံးဝလုံးဝစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီးလုံးဝမထူးဆန်းဘူးလို့လူတွေကိုပြောဖို့တံခါးထဲဝင်လာတဲ့လတ်ဆတ်တဲ့လမ်းလို့မြင်တယ် သူကကောင်းကောင်းပြောတယ်၊ သူကပညာတတ်တယ်၊ လူတစ်ယောက်ကိုတက်နိုင်ဖို့နဲ့ပြုမူကျင့်ကြံဖို့ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကိုဖန်တီးပေးတဲ့စာသားတွေကိုသူကစွန့်လွှတ်လိုက်တယ်။ အရာအားလုံးကိုချွတ်ပစ်လိုက်ရုံပဲသူဟာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူထင်တာတော့ငါတို့မှာရှိမှာလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့နာမည်ကြီးလူကြိုက်မများခင်၊ ငါ့သား ismichael creden ကိုဒီလမ်းကြောင်းမှာမင်းအတွက်မင်းအတွက်နာမည်ကြီးအတ္ထုပ္ပတ္တိများကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမသုံးမီ၊ ဒီဟာကဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုမင်းကိုပြောဖို့တောင်းဆိုတာတွေအပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်များသည်သင်ဒီမှာရှိနေစဉ်ဖြစ်သည်။ သူတို့ Instagram မပေါ်မီကျွန်ုပ်တို့၏ Instagram ကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
Landis ဆိုင်ကလုန်း၁၉၁၂ ခုနှစ်တွင်လက်ရှိပိုင်ရှင်ရစ်ချတ်နှင့်ရောဘတ်တို့၏အဖိုးကတည်ထောင်ခဲ့သည်Landis။ TheLandisမိသားစုရှိတယ်ပိုင်ဆိုင်သည်နှင့် operatedLandis ဆိုင်ကလုန်းအဲဒီအချိန်ကစပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်, ထိုကဲ့သို့သောပြောဆိုချက်ကိုနိုင်သည့်အဖိုးတန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနည်းငယ်အကြားနေရာတစ်ခုဝင်ငွေ။ အထူးပြု:Landis ဆိုင်ကလုန်းအရာအားလုံးအထူးပြု!
လူအများစုအတွက်နာမည်ကြီးကျော်ကြားမှုတစ်ခုဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးမမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အခြားသူများအတွက်မူနာမည်ကြီးတစ်ခုနှင့်ကြုံတွေ့ရမည့်အခွင့်အရေးသည်နာကျင်မှုနှင့်ဝေဒနာများစွာခံစားရစေသည်။ လူမျိုးရေးဖြစ်ပွားမှုမှသည်ကားလေယာဉ်ပျက်ကျခြင်းဘေးအန္တရာယ်များအထိအပြစ်မဲ့သူများ၏ဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့သည့်အနုပညာရှင်များကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
Twilight မင်းသမီး Ashley Greene ၏အနောက် Hollywood ဟောလိဝုဒ်တိုက်ခန်းသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သောအခါသတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်းအများစုသည်သူမ၏ခွေးဖြစ်သော Marlo, Greene's Neighbors အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏မီးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်သည်။ အဆောက်အ ဦး ၏တံခါးပေါက်ဖြစ်သော Adrian Mayorga နှင့်အခြားသောအိမ်ငှားများနှင့်အတူမီးအားမစတင်ခင်ကပင်သူတို့အိမ်တွင်မကြည့်ရှုနိုင်သည့်ဖယောင်းတိုင်ကြောင့်မီးနှင့်ဆက်စပ်သောပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်ဂရင်းကိုတရားစွဲခဲ့သည်။ TMZ ၏အဆိုအရဒေသခံများကဂရင်းသည်အိမ်ရှင်ကသူမအိမ်သို့ပြန်လည် ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုလက်ခံသော်လည်း၊ ပါတီပွဲများမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိပြီးမီးလောင်မှုအတွက်တာဝန်ယူမှုရှိသည့်တိုင်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်ဟုပြောဆိုကြသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် TMZ မှဖော်ပြချက်အရ Greene သည် Mayorga နှင့်သဘောတူညီမှုမရရှိသေးသည့်ပမာဏကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင် Matthew Broderick ကားမောင်းနေစဉ်ကားတစ်စီးသည်အခြားကားတစ်စီးနှင့်တိုက် မိ၍ လူနှစ် ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ Anna Gallagher, 30; နှင့်သူမ၏မိခင်, Margaret Doherty, 63 နှစ်။ Broderick ဒဏ်ရာအမျိုးမျိုးအတွက်ဆေးရုံမှာတစ်လခန့်နေခဲ့ပေမယ့်မတော်တဆမှုကနေ $ 175 ဒဏ်ငွေအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
ကတ္တရာမဲ့မောင်းနှင်မှုအတွက်ကန ဦး တာဝန်ခံမှုကို Gallagher ကတရားစီရင်ချက်ကိုတရားမျှတသောခရီးစဉ်တစ်ခုဟုခေါ်ခဲ့သည်။ လေယာဉ်ပျက်ကျပြီး ၁၅ နှစ်အကြာ New York Post သတင်းစာက Broderick သည်မတော်တဆမှုဒဏ်ခံရသူများ၏မိသားစုဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးခွင့်လွှတ်ရန်အသင့်ရှိပုံကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ Post: 'သူကကျွန်တော့်အမေနဲ့အစ်မကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမသတ်ခဲ့ဘူး။
ABS များအတွက် kettlebell လေ့ကျင့်ခန်း
အဲဒီတုန်းကပြင်းထန်တဲ့ခံစားချက်တွေရှိခဲ့ပေမယ့်ငါသူ့ကိုခွင့်လွှတ်ခဲ့ပြီးသူ့ကိုစိတ်မဆိုးဘူး။ Broderick ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမaddedဲသည်သင်နှင့်တွေ့ဆုံရန်အဆင်သင့်ရှိသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဒေါသလည်းမရှိ၊ ဒေါသလည်းမရှိဘူး။
မိသားစုသည်ကျောင်းပြီးမြောက်ရန်ကြိုးစားသည်။ '' ကံမကောင်းတာကတော့ဒီဟာရဘယ်တုန်းကမှဖြစ်ခဲ့တာလားဆိုတာတော့မသေချာဘူး။ ဒိုဟာတီက ၂၀၁၂ မှာဘက်မလိုက်တဲ့သတင်းထောက်ကိုပြောခဲ့တာကသူနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိခဲ့ဘူးဆိုတာပဲ။ ဒါပေမယ့်အဲဒီအချိန်ကဒိုဟာတီကသူဟာ Broderick ကိုခွင့်လွှတ်ပြီးမတော်တဆဖြစ်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့အခိုင်အမာပြောခဲ့တယ်။ ။ Popney ကြယ်ပွင့်မင်းသမီးသည်အများပြည်သူပြိုကွဲသွားသောအခါ Britney Spears ၏ထူးခြားသောအပြုအမူသည်ရယ်စရာဖြစ်ခြင်းကိုရပ်တန့်စေသောနှစ်ဖြစ်သည်။
သူမ၏စံချိန်တင်တံဆိပ်ဖြင့်အထူးထိန်းချုပ်ထားသောလှံများသည်နောက်ဆုံး၌ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းသွားပုံရသည်။ သူမဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြsignsနာများနှင့်ရုန်းကန်နေရကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းပထမဆုံးအနေဖြင့်ပြသခဲ့သောလက္ခဏာများ။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်သူသည် Las Vegas ရှိအထက်တန်းကျောင်းချစ်သူ Jason Alexander နှင့်လက်ထပ်သည့်အခါကမ္ဘာကြီးကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေခဲ့သည်။
သူမသည်အလက်ဇန္ဒားကိုသီးသန့်ဂျက်လေယာဉ်ဖြင့်မောင်းနှင်ခဲ့သည်။ သူတို့သည်ဒေသခံတီးဝိုင်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်သီဆိုဖျော်ဖြေရန်စိတ်ကူးနေကြသည်။ သူမ၏မန်နေဂျာ Larry Rudolph သည်ဖျက်သိမ်းခြင်းစာရွက်စာတမ်းများထုတ်ပေးရန်ထိပ်တန်း Vegas ရှေ့နေကိုစီစဉ်ပေးခဲ့သည်။ Rolling Stone ကသူမသည်သူမ၏လုပ်ရပ်များနှင့် ပတ်သတ်၍ နားမလည်သောကြောင့်သူမလက်ထပ်ခွင့်ကိုလက်မခံနိုင်ခဲ့ဟုဆိုသည်။ '' အလက်ဇန်းဒါးသို့သော်သဘောမတူ။
သူ၏ထင်မြင်ချက်အရ Spears အဖွဲ့သည်သာမန်ထက်ထူးကဲသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်သူတို့နှစ် ဦး သည် prenuptial သဘောတူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်မထိုးခဲ့ကြသော်လည်းသူသည်ငွေအတွက်လည်းမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အမှန်စင်စစ် Alexander သည် ABC News သို့ပြောကြားရာတွင်သူသည် Spears ကိုချစ်သောကြောင့်သူမသည်လည်းထိုနည်းတူခံစားသည်ဟုယုံကြည်ခဲ့သည်။ သူက“ ဒါကအခက်ခဲဆုံးအပိုင်းပဲ။
ငါသိသာဂိမ်းထဲမှာငါ့ခံစားချက်တွေကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ လက်ထပ်ပွဲသည် ၅၅ နာရီသာကြာပြီးအလက်ဇန္ဒားသည်လူးဇီယားနားသို့နည်းပြဖြင့်ပြန်ခဲ့ရသည်။ Terry 'Hulk Hogan' Bollea သည် ၂၀၀၇ သည်ကောင်းမွန်သောနှစ်မဟုတ်ပါ။ အကြောင်းမှာယခင်နပန်းသမား၏သားဖြစ်သူသည်အဆွေတော်အားအမြဲတမ်း ဦး နှောက်ကိုပျက်စီးစေသည့်ဆိုးဝါးသောယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
Nick Bollea သည်သူ၏ Toyota Supra ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်မောင်းနှင်နေစဉ်စွန်ပလွံပင်သို့ပြိုကျသွားသည်။ သူ၏ခရီးသည်အီရတ်စစ်ဝါရင့် John Graziano ကိုအနည်းဆုံးသတိထားမိစေသည်။ Graziano ကိုယခုအချိန်တွင်ဆွေမျိုးများကကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရမည်။ “ မင်းသူ့ကိုတွေ့ဖူးလား။ '' အမ်၊ ငါဂျွန်ကိုလာလည်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဂျွန်ကိုအခုလာလည်ခွင့်မရဘူး '' မျက်မြင်သက်သေများအဆိုအရ Bollea သည်ကားကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရကာ ၆ လခန့်အရက်ဆိုင်များနောက်တွင် Dodge Viper ကိုယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
Graziano ၏ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့်နောက်ထပ်ကလေးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးနောက်သူအား ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်အစောပိုင်းကလွှတ်ပေးခဲ့သည်။ ကြေငြာချက်တစ်ခုတွင် Graziano ၏ရှေ့နေကပြောကြားခဲ့သည်မှာ“ Deble Graziano ၏ဘ ၀ တွင်အဆိုးရွားဆုံးအဖြစ်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်သောသူတို့၏သား Mike သေဆုံးခြင်းသည်ထိုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုကြံစည်ခြင်းသည် Bollea မိသားစုအတွက်ဖြစ်သည်။ ” နောက်ပိုင်းတွင်ပြန်လွတ်လာသည့်အကျဉ်းထောင်တွင်ရှိခဲ့သည့်ဖခင်နှင့်ဖုန်းပြောဆိုမှုများပြုလုပ်ရာတွင်သူသည်အဖြစ်မှန်ပြပွဲမှငွေမည်မျှရနိုင်သည်ကိုစတင်ပြောဆိုခြင်းအားဖြင့်ဘောလီယာသည်သူ့ကိုယ်သူကောင်းစွာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
Graziano ၏ရှေ့နေက Bollea သည်သူ၏လုပ်ရပ်အတွက်စစ်မှန်သောနောင်တမပြခဲ့ဟုဆိုသည်။ O.J. ပေမယ့်
Simpson ကို Nicole Brown Simpson နှင့် Ronald Goldman တို့၏ရာဇ ၀ တ်မှုတရားရုံးတွင်တရားစွဲဆိုထားသည်။ Simpson သည် Goldman မိသားစုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုတွင်ရှုံးနိမ့်မှုကြောင့် Simpson ကဒေါ်လာ ၃၃.၅ သန်းအကြွေးတင်ခဲ့သည်။
ရာဇ ၀ တ်မှုခုံရုံးအပြီးအနှစ် ၂၀ အတွင်း CNBC သို့ပြောဆိုရာတွင် Goldman ၏ညီမကင်ကမူတရားသူကြီးသည်ဂျူရီလူသတ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိကြောင်းနောက်ဆုံးတွင်တရားစွဲဆိုမှုသည်အောင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ Simpson ကိုပေးရမည့်ဆယ်စုနှစ်ချီတိုက်ပွဲကိုမိသားစုကခံရပ်နိုင်ခဲ့သည်ဟုသူမကပြောကြားခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်အတူ, ထိုဆု 2014 ခုနှစ်မှစ။ $ သန်း 40 ကျော်စုစုပေါင်း။
ကင်မ်က 'ကျနော်တို့က ၁ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာကောက်ယူပါတယ်' ဟုပြောသည်။ ဒေဝါလီခံခြင်းဆိုင်ရာတရားသူကြီးတစ် ဦး က 'ငါလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ငါလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လို့ခေါ်တဲ့လူသတ်မှုတွေအကြောင်းတစ္ဆေရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုအခွင့်အရေးပေးလိုက်တဲ့အခါ Goldmans ဟာသူတို့ရဲ့ဆုအနည်းငယ်မျှကိုရရှိခဲ့သည်။ '' သူကဒီစာအုပ်ရဲ့အရေးအသားမှာသူမပါ ၀ င်ဘူးလို့ဆိုပေမယ့်သူကလုပ်ခလစာပေးရပြီးအရောင်းမြှင့်တင်ရေးအင်တာဗျူးတောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ သူကလူသတ်မှုအကြောင်းပြောပြတယ်။
Simpson သည်နောက်ရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့်လက်နက်ကိုင်လုယက်မှုဖြင့်ထောင်ဒဏ် ၃၃ နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ သူသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်လွှတ်ပေးခြင်းမပြုမီကိုးနှစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးထိုအချိန်တွင် Goldman မိသားစုသည်သူလွတ်မြောက်ခြင်းအပေါ်စိတ်ပျက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဘားနောက်ကွယ်မှကိုးနှစ်ရှိ Simpsons များက၎င်းတို့အားမိသားစုအတွက် 'ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း' ဟုခေါ်ဆိုခဲ့ပြီး၊ Kim Goldman နှင့်သူမ၏ဖခင်နှစ် ဦး စလုံးသည် Simpson အားတရားမျှတမှု၏ကျေနပ်မှုအရ Simpson အားလူထုအခြေပြုဖြေရှင်းမှုများပြုလုပ်ရန်ကတိပြုခဲ့ကြသည်။
Justin Bieber ဘေးမှာနေရသလား။ ကောင်းပြီ၊ အကယ်၍ မင်းကကြောက်မက်ဘွယ်၊ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့၊ အသက်အန္တရာယ်ရှိစေတာကိုအဖြေပေးမယ်ဆိုရင်မင်းဒါကတော်တော်ဆိုးသွားမှာပါ။ အိမ်နီးချင်းဟောင်း ၂ ဦး အား ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ Jeffrey နှင့် Suzanne Schwartz က 'စိတ်မကောင်း' သောအဆိုတော်နှင့်သူ၏ကိုယ်ရံတော်များက ' .. သူမနှင့်သူမ၏မိသားစုကိုအကြိမ်ကြိမ်နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ အိမ်ကိုဥနှင့်အတူဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်ဂျူးလူမျိုးဆန့်ကျင်ရေးမှတ်ချက်များအားခြိမ်းခြောက်ခြင်း။ ဂျက်ဖရီကသူကသူ့ရဲ့ Ferrari ကိုကားမောင်းနေတယ်လို့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ကာလာဘေ့စ်ရှိလမ်းတွေပေါ်မှာမောင်းနှင်နေတယ်လို့ဂျက်ဖရီကပရင့်စ်ကိုပြောပြီးတဲ့နောက်ဘီဘာဟာဂျက်ဖရီရဲ့မျက်နှာကိုတံတွေးထွေးပြီးစွပ်စွဲချက်တွေနဲ့အတူအလားတူထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် Bieber သည်မိသားစုမှ Schwartz အိမ်တွင်ကြက်ဥတစ်ဒါဇင်ပစ်ချခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ စွပ်စွဲချက်များဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ထို့အပြင်နှစ်နှစ်အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရသည်။ တရားစွဲဆိုမှုတွင်ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုလူသိများလာပြီးနောက် Schwartz မိသားစုသည်ဘီဘာ၏ပတ်ဝန်းကျင်၊ ပရိတ်သတ်များနှင့်မီဒီယာများမှအမြဲတမ်းနှောင့်ယှက်မှုခံနေရသည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။ လော်ရာဘုရ်ှသည်နှစ်ပေါင်းများစွာသူမကိုခြောက်လှန့်ခဲ့သောသူမ၏ခင်ပွန်းကသမ္မတဖြစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကြောင့်ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်ကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်သည်။
ဂျော့ခ်ျစဉ်အတွင်းဒဗလျူဘုရှ်၏ပထမဆုံးရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောမတော်တဆမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထင်မြင်ချက်များစွာထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး၊ သမ္မတရာထူးသက်တမ်း ၂ ခုအတွင်းတွင်ဘာသာရပ်သည်မညီမညာဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ သူမ၏ခင်ပွန်းထွက်ခွာပြီးတစ်နှစ်အကြာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်လော်ရာဘုရ်ှသည်သူမ၏ကျောင်းနေဖက်၏ဘဝကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသောတိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
၁၉၆၃၊ နို ၀ င်ဘာလတွင် ၁၇ နှစ်အရွယ်ဘုရ်ှသည်သူမ၏ဖခင် Chevy Impala တွင်အမှတ်အသားပြုခဲ့သည်။ သူမနှင့်သူငယ်ချင်းတစ် ဦး သည်ကားမောင်းသည့်ပြဇာတ်ရုံသို့အလျင်အမြန်ပြေးဝင်လာပြီးအနာဂတ်ပထမအကြိမ်အမျိုးသမီးသည်ဒေသခံအထက်တန်းကျောင်းကြယ်ပွင့်အားကစားသမား Michael Dutton Douglas ကမောင်းနှင်သည့် Corvair limousine ကိုမတွေ့ခဲ့ရကြောင်းယခင်သတင်းရပ်ကွက်များအရသိရသည်။ ဘုရ်ှမီးတောက်သက်ရောက်မှုအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒေါက်ဂလပ်၏သေးငယ်ပေါ့ပါးသောကားသည် ၁၅ မီတာအကွာတွင်ဆင်းသက်ခဲ့ပြီးမတော်တဆမှုတွင်သူ၏လည်ပင်းကျိုးခဲ့သည်။
သူမ၏စာအုပ်တွင်ဘုရ်ှက 'ငါဒီနို ၀ င်ဘာလမှာငါယုံကြည်ခြင်းပျောက်ဆုံးခဲ့တယ်၊ ဘုရားသခင်အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတာပထမဆုံးအကြိမ်ပဲ
တစ်ခုတည်းသောအဖြေမှာအရေးပေါ်ခန်းရှိပါးလွှာသောကုလားကာ၏တစ်ဖက်ခြမ်းတွင်မစ္စစ်ဒေါက်ဂလပ်စ်အားနစ်မြုပ်နေသည်။ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာဘယ်တော့မှသင်ဘယ်တော့မှမလုပ်နိုင်ဘူး၊ သင်မပြောင်းလဲနိုင်ဘူး၊ ဘယ်လောက်ပဲလိုချင်ပါစေမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ဒီအဖြစ်ဆိုးတွေကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတာကိုခက်ခဲတဲ့လမ်းစဉ်ကိုငါသင်ယူခဲ့တယ်။ 'ဖျော်ဖြေရေးသမိုင်းတွင်သြဇာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည့် Phil Spector သည် ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် Wall of Sound ဟုခေါ်သောနာမည်ကြီးဖန်တီးမှုနှင့်အပါအ ၀ င်ပေါ့ပ်ဂီတများဖြစ်သော Ronettes, The Crystals, The Righteous Brothers နှင့် Beatles အပါအ ၀ င်ကျော်ကြားခဲ့သည်။ John Lennon နှင့် George Harrison တို့သည်တစ်ကိုယ်တော်အနုပညာရှင်များဖြစ်သည်။
ဂီတကျွမ်းကျင်သူများကသူ၏လွှမ်းမိုးမှုသည်ဤပူးပေါင်းမှုထက်များစွာသာလွန်သည်။ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအများပြည်သူ၏အကဲဖြတ်မှုများမရှိဘဲ Spector သည်မင်းသမီး Lana Clarkson သေဆုံးမှုအတွက်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ Alhambra ရှိ Spector ၏အိမ်ကြီးတွင် Clarkson သေဆုံးခဲ့သည်။
သူမသည်ပါးစပ်အမိုးမှတဆင့်သေနတ်ဒဏ်ရာကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးနောက်နားခန်းထဲ၌ကုလားထိုင်ပေါ်သို့ကျသွားသည်။ သူမသေဆုံးချိန်၌ C Larkson သည်အသက် ၄၀ ရှိခဲ့သည်။ လက်မခံနိုင်သောအပြုအမူတစ်ခုအပြီးတွင် Spector အား ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် Clarkson ၏လူသတ်မှုဖြင့်အများဆုံးထောင်ဒဏ် ၁၉ နှစ်ချမှတ်ခဲ့သည်။
သူသည်အသက် (၈၈) နှစ်ပြည့်သောအခါ ၂၀၂၈ တွင်လွှတ်ပေးခွင့်ရှိသည်။ အစိုးရရှေ့နေက Spector ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်။ 'လွန်ခဲ့တဲ့ရုရှားကကစားတဲ့အမျိုးသမီး ၆ ယောက်ဟာအမျိုးသမီး ၆ ယောက်ပါ။ Lana သည်ဆဌမဖြစ်သည်။ သူမရဲ့မိသားစုကိုယ်စားကြေငြာချက်တစ်ခုမှာ Clarkson ရဲ့မိခင်က 'ငါတို့မိခင်ရဲ့အပြန်အလှန်အစီအစဉ်အားလုံးပျက်စီးသွားမှာပါ။
ယခုငါသာသူမ၏သင်္ချိုင်း၌သွားရောက်နိုင်ပါတယ်။ သတ္တုဒဏ္legာရီဆိုင်ရာအဓိကအဆိုတော်အဖြစ် Motley Crue အဖြစ် Vince Neil သည် ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ချိန်တွင်အမျိုးသားရေးအာရုံစိုက်မှုများစွာရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ Dingley အဖွဲ့သည် Hanoi Rocks နှင့်ဒုတိယကားတွင်ပါ ၀ င်သူနှစ် ဦး အားအပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။
လူသတ်မှုနှင့် DUI စွဲချက်တင်ခံရသူ Neil သည် ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင်ပေးခဲ့သောရက် ၃၀ ပြစ်ဒဏ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာဖြစ်သည်။ သူသည်စုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၃ သန်းပေးပြီးနောက်ပိုင်းတွင် 'ငါထောင်ထဲကနေထွက်လာပြီ' Dingley သည်ခရီးသည်ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်နေစဉ်၊ Neil သည်ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ RedondoBeach ရှိအရက်ဆိုင်မှအိမ်သို့ကားမောင်းနေစဉ်သူသည် Volkswagen Daniel Smithers (၂၀) ​​နှင့်ခရီးသည် Lisa Hogan (၁၈ နှစ်) တို့သည်ခေါင်းကိုပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများကသေးငယ်သောဒဏ်ရာများကိုသာခံစားခဲ့ရသူ Neil သည်အမှတ် (၇) တွင်သွေးယိုစီးမှုအဆင့်ရှိခဲ့ပြီးအချက် (၁) သည်တရားဝင်ကန့်သတ်ချက်ဖြစ်သည်။ Neil ၏ဂုဏ်သတင်းသည်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သော်လည်း Motley Crue ၏ကျော်ကြားမှုမှာတဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးမူးယစ်နေစဉ်ကားမောင်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ Neil သည် DUI ကိုထပ်မံဖမ်းဆီးမှုများအပါအ ၀ င်ဥပဒေနှင့်အခြားဆက်သွယ်မှုများရှိခဲ့သည်။
John Landis သည် Blues Brothers၊ တိရိစ္ဆာန်အိမ်များ၊ ကုန်သွယ်ရေးနေရာများနှင့်အမေရိကသို့လာရောက်ခြင်းစသောရုပ်ရှင်များအတွက်တာဝန်ခံဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်မှာ Twilight Zone ရုပ်ရှင်အထူးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုရိုက်ကူးစဉ်မှာ Star Vic Morrow နဲ့ကလေးသရုပ်ဆောင်နှစ် ဦး အသတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအဆုံးသတ်သွားသည်။ 'ဒါဟာအားလုံးကျော်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါတို့စလိုက်တာ၊ စက်ဝိုင်းတစ်ဝက်လောက်လောက်ပဲရှိတော့တယ်၊ ပြီးတော့မြစ်ကမ်းခြေပေါ့။ Landis သည်သက်သေအထောက်အထားများကိုချိုးဖောက်ခြင်းအားသက်သေပြနေသည်ဟုသက်သေပြခဲ့သော်လည်း ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင်ပေါ့ပေါ့ဆဆသတ်ဖြတ်မှုအတွက်အပြစ်မရှိကြောင်း Landis နှင့်အခြားရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီး ၇ နှစ်အရွယ် Myca Dinh Lee နှင့် ၆ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်များ Renee Chen ကရုံးတင်စစ်ဆေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ Landis သည်ရက်စက်မှုနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောစွပ်စွဲချက်များနှင့် Landis နှင့်အခြားကလေးငယ်များအားဤကလေးအလုပ်သမားဥပဒေများအားချိုးဖောက်သည်ဟုစွပ်စွဲခြင်းမပြုဘဲအစိုးရရှေ့နေများကအရှိန်မြှင့်တင်ခဲ့သည် မနက်ဖြန်ကလေးငယ်များသည်မတော်တဆမှုဖြစ်ပြီးနောက်မကြာမီတွင်အခြေချရန်သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
Mike Anderson သည်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုတစ်ခုအရ Lance Armstrong၊ စက်ဘီးစက်ပြင်ဆရာနှင့် Gopher အထွေထွေလက်ထောက်အဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည် - အမ်းစထရောင်းပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးသွားသောအခါသူနှင့်အန်ဒါဆင်တို့သည်စက်ဘီးဆိုင်ဖွင့်ရန်ပူးပေါင်းမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အန်စထရောင်းသည်စက်ဘီးချန်ပီယံ၏အငြင်းပွားဖွယ်ကောင်းသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိသောမူဝါဒအားမေးမြန်းခြင်းကြောင့်သူ့ကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အန်ဒါဆင်၏အိပ်မက်သည်နိုးထနေသောအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပြင်ပမဂ္ဂဇင်းဆောင်းပါးတွင်အန်စထရောင်းသည်အမ်းစထရောင်းသည်ဆိုင်ကယ်ဆိုင်မှထွက်ခွာခဲ့သည်။ ထုတ်ဖော်သဘောတူညီချက်။
သူသည်အမ်းစထရောင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ဆိုပါကသူ၏ဂုဏ်သတင်းကိုဖျက်ဆီးရန်ကြိုးပမ်းမှုအတွက်အန်ဒါဆင်အားမီဒီယာနှင့်ဥပဒေရေးရာပြသနာများကိုစတင်ခဲ့သည်ဟုဖော်ပြခဲ့ပါက၎င်းသဘောတူညီချက်သည်အန်ဒါဆင်အားငွေအမြောက်အများအတွက်ငွေရေးကြေးရေးအရတာဝန်ရှိစေလိမ့်မည် အန်ဒါဆင်ကသူဟာနှစ်တွေတစ်လျှောက်နယူးဇီလန်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်တခြားမင်းသားချာလီ Sheen ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာအန္တရာယ်ရှိနေလို့ပါ။ သူ့ကိုယ်ပိုင်မဆင်မခြင်လုပ်ရပ်များ၏? NBC Today တွင်သူသည်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးရှိကြောင်းပြသခြင်းအားဖြင့် Sheen သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်မြင့်မြတ်သောအမှုကိုပြုခဲ့သည်။ သူကအိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးရှိနေသည်ကိုလေးနှစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးသူမအနေဖြင့်အများပြည်သူထံမှလျှို့ဝှက်ချက်ကိုသိမ်းဆည်းရန်အတွက်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းကိုငွေတောင်းခံသူများထံမှတိတ်တဆိတ်အပ်နှံခဲ့သည်။ 'ဒီလူတချို့ကိုမင်းပေးနေတုန်းပဲလား' '' ဒီနေ့ငါမဟုတ်တော့ဘူး '' t သို့သော်သူ၌သူ၏လိင်ကြင်ဖော်ဖက်များစွာ၏လျှို့ဝှက်ချက်လည်းရှိသည်။ Sheen သည်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်နေစဉ်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏အခြေအနေကိုမှေးမှိန်ထားခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိစေပြီး Sheen ၏ဇာတ်ကောင်အတွက်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေသည်။
Radar Online မှဖော်ပြချက်အရ Sheen ၏အဒမ်ဟုဆိုသူအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်သူမအပြုအမူကြောင့်လိင်လုပ်သား ၂၀ ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ Sheen ၏ကျေးဇူးကြောင့်ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာမရေရာသောစိုးရိမ်ပူပန်နေသောအလုပ်သမားများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ပြီးသူမအနေဖြင့်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးရှိကြောင်းမိတ်ဖက်များအားထုတ်ဖော်ပြသသောအခါသူလိမ်ခဲ့သည်ဟုသူမကပြောကြားခဲ့သည်။ အမည်မသိအမျိုးသမီးတစ် ဦး က Ned အားရှင်းပြသည်မှာသူကသူကိုယ်တိုင်တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်၍ သူ့မှာအိပ်ချ်အိုင်ဗွီရှိသူကိုပြောနိုင်တာလား၊ ဒါမှမဟုတ်တစ်ချိန်ချိန်မှာသူပြောနိုင်ပြီးသူတို့နဲ့စီးပွားရေးလုပ်သင့်လားဆိုတာကိုအပြည့်အဝထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးပေးတယ်။ လုပ်ချင်လားမလုပ်ချင်ဘူး 'သူ! ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့တွင်သူမမကျေနပ်သည့်အနေဖြင့် Caitlyn Jenner သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အသတ်ခံရသည့်ပစိဖိတ်ကမ်းခြေအဝေးပြေးလမ်းတွင်မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
Jessica Steindorff ကမောင်းနှင်သည့် Prius သည်ရုတ်တရက်ရပ်တန့်သွားချိန်တွင်သူမသည်အသက် ၇၀ အရွယ် Kimberly Howe Lexus sedan ကားမှမောင်းနှင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ Howe က Jenner ရဲ့ကားကိုသာထိဖို့ဘရိတ်ကိုနှိပ်ပါ။ Howe's Lexus ကိုလာမည့်ယာဉ်ကြောသို့တွန်းပို့ပြီးမတော်တဆမှုနှင့်တရားစွဲဆိုနိုင်ခြင်းမရှိသော Hummer ၏ကားကိုထိမိသောအခါထိခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့သည်။
တရားရုံး၏စာရွက်စာတမ်းများတွင်လော့စ်အိန်ဂျယ်လိအစိုးရရှေ့နေကဘီးနောက်ကွယ်တွင်သူမ၏အပြုအမူသည်အကြောင်းပြချက်မရှိကြောင်းသက်သေပြရန်လုံလောက်မှုမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်အိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ်ဟောင်းအားသီးခြားတရားစွဲဆိုမှုများဖြင့်ဆက်လက်ရိုက်နှက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဂျဲနာသည်ဒီဇင်ဘာလတွင် Steindorff နှင့်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးတစ်လအကြာတွင် Howe ၏သားသမီးများနှင့်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည်။ ဟမ်းမားကိုမောင်းထုတ်သောမိသားစု၏တတိယအကြိမ်တရားစွဲဆိုမှုကြောင့် Jenner သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၈၀၀,၀၀၀ ပေးချေရန်သဘောတူခဲ့သည်။
ထိုအချိန်မှစ၍ ဂျဲနာသည်သားကောင်၏မိသားစုအားသူမ၏ 'ရိုးသားမှုနှင့်နက်ရှိုင်းသောဝမ်းနည်းကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ အဖြစ်မှန်ကြယ်ပွင့်က Paparazzi ကိုသူမသေဆုံးခင်အချိန်ကသူမကိုအာရုံပျံ့လွင့်စေတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးလေယာဉ်ပျက်ကျချိန်မှာသူမဖြစ်တယ်လို့တရားစွဲဆိုခဲ့တယ်။ သူသည်ကျော်ကြားမှုမတိုင်မီက Mark Wahlberg သည်ဘော်စတွန်၏လမ်းများပေါ်တွင်ထင်ရှားသောဆိုးသွမ်းသူဖြစ်သည်။
၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင်အာဖရိက - အမေရိကန်စာသင်သားတစ် ဦး တွင်ကျောက်တုံးများနှင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားသည့်ဘာသာစကားများနှင့်ကွဲလွဲသောအဖြစ်အပျက်နှစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးနောက်အနာဂတ်ရက်ပါရက်ကို Funky Bunch ကလူထုအခွင့်အရေးဆိုင်ရာအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ တားမြစ်သည့်အမိန့်သည် Wahlberg ကိုသူအားနောက်တဖန်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုနောက်တဖန်လူမျိုးရေးအရနှောက်ယှက်လျှင်သူသည်ထောင်ထဲသို့ရောက်လိမ့်မည်ဟုသတိပေးခဲ့သည် ၁၉၉၈ ခုနှစ်Aprilပြီ ၈ ရက်တွင် Wahlberg သည်သစ်သားတုတ်ကြီးကိုသယ်ဆောင်စဉ်သူ့ကားပေါ်မှဆင်းလာသည်။
ရဲသတင်းများအရ Wahlberg သည် Lam ကိုသူ၏လူမျိုးရေးကြောင့်စော်ကားခြင်းမပြုမီကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခဲ့သည်။ Wahlberg အဖမ်းခံရပြီးနောက်ထိုညတွင်နောက်သို့ပြန်သွားချိန်တွင်သူကရဲကို 'မင်းဒါကိုမလုပ်ဘူး' ဟုကြွားဝါခဲ့သည်။ ကျွန်တော်အပေါက်ဖောက်လိုက်သည် ဒါပေမယ့်အဲ့တာကမပြီးသေးပါဘူး
Wahlberg သည်ထိုနေရာမှထွက်ပြေးသွားပြီး Eye လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက်ခြင်းဖြင့်အခြားဗီယက်နမ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရဲများကသူ့ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ဖမ်းမိပြီးနောက် Wahlberg သည်သူ၏သားကောင်များကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုသတင်းများကဆိုသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် Wahlberg သည်သူ၏ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်မှုအတွက်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်လျှောက်ထားသော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခြင်းကိုမလိုလားအပ်သောမီဒီယာကိုအာရုံစိုက်မိပြီးနောက်နောက်ပိုင်းတွင်လျှောက်လွှာကိုပယ်ချခဲ့ပြီး၎င်းအားကျူးလွန်ခံရသူတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခွင့်တောင်းပန်ခဲ့သည်ဟုဝန်ခံခဲ့သည် ။
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးဆောင်းပါးများထဲကတစ်ခုထွက်စစ်ဆေးပါ! ထို့အပြင်၊ သင်အကြိုက်ဆုံးကြယ်များအကြောင်း Nicki Swift ဆောင်းပါးများသည်နောက်ဆက်တွဲဖော်ပြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယူကျု့ချန်နယ်ကိုစာရင်းသွင်းပြီးခေါင်းလောင်းထိုးပါစေ၊
Floyd Landis နဲ့ Lance Armstrong တို့အကြားဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ။
Landisထို့အပြင်ဆန့်ကျင်ဖက်ဒရယ်သတင်းပေးတရားစွဲဆိုမှုတင်သွင်းခဲ့သည်အမ်းစထရောင်းသူကစွပ်စွဲရှိရာ 2010 ခုနှစ်တွင်အမ်းစထရောင်းယူအက်စ်စာတိုက်ဝန်ဆောင်မှု (USPS) မှငွေလက်ခံသောအခါအဖွဲ့မန်နေဂျာများကယူအက်စ်အစိုးရကိုလိမ်လည်သည်။ဇူလိုင် ၂၀ 2020 ဂရမ်။
Lance Armstrong နှင့် Greg Lamonde တို့သည် ၁၉၈၆၊ ၁၉၈၀ နှင့် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များတွင် Victorygreg ၌ကျင်းပသော Tour Defrance Cup ကိုအနိုင်ရခဲ့သည့်တစ်ခုတည်းသောအမေရိကန်များဖြစ်သည်။ Lance Arm Power Enhancing မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုလွှမ်းမိုးသည်၊ အကြောင်းမှာယောက်ျားတစ်ယောက်သည်စင်ကြယ်ပြီးယောက်ျားတစ်ယောက်သည်စင်ကြယ်သည်ဟုဆိုလျှင် ရှုပ်ထွေးပြီးအငြင်းပွားဖွယ်ရှိသောမိသားစုများသည်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုတိကျသေချာစွာမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးသင်မသိရှိမီသင်၌ Steroids-infused မျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ထားသော beeflets များရှိသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏မူးယစ်ဆေးဝါးကင်းစင်သည့်သူရဲကောင်း greglamonde သည်သူဖြစ်သည် ပထမ ဦး ဆုံးအမေရိကန်နှင့်အမ်းစထရောင်းအကြာတွင်လေတိုက်သောကြောင့် de de france အစဉ်အဆက်အနိုင်ရခဲ့ဖူးသောတစ်ခုတည်းသောအမေရိကန်လုယက်ခံခဲ့ရသည်ကမုန်တိုင်းတိုက်ရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းမဟုတ်ခဲ့, ထိုသို့ de de france ofsporta အားလုံး၏အရှိဆုံးအပြင်းထန်ဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်သော 2500 ရှည်လျားသောရက်သတ္တပတ် 2500 milebik တောင်တန်းများပေါ်တွင်ပြိုင်ပွဲ, ပိုကောင်းတဲ့ biker upleman s အဖြစ်စီးခံရဖို့သင့်လျော်သောထင်, ပြင်သစ်အမှန်တကယ်မသိဘဲမရှိဘဲပြင်သစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် 86th Tour အယ်လ်အပေါ်လိုအပ်သောအရာ, 19 မှာလိုလားသူလှည့် ဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့တဲ့အသင်းဖော်တွေလိုနေတဲ့အမေရိကန်လူငယ်လေးကိုခေါင်းစဉ်ယူပြီးမကြည့်ချင်ဘူး၊ သူ့အသင်းဖော်တွေကိုငါသူ့ကိုအနိုင်မရခဲ့ရင်သူရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကသူရဲဘောကြောင်မှုကိုကာကွယ်ဖို့ဘာမှလုပ်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်၊ ဒစ္စနေးတစ်မျိုးမျိုးလိုသူတို့ကိုအဆိပ်သင့်စေမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်၊ ခရီးသွားအော်ပရေတာ defrance ကငါ့ဆီရောက်လာပြီး Grete၊ သတိထားရမယ်။ အခုအရမ်းအန္တရာယ်များတယ်၊ ရေပုလင်းတွေကိုဂရုစိုက်ပြီးအခွင့်အလမ်းတွေရှိတယ်။ အသက် ၂၅ နှစ်မှာအသက် ၈၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Greg Lamont ဟာ de de france အနိုင်ရခဲ့သည့်ပထမဆုံးအမေရိကန်ဖြစ်လာသည်။ Greg ရဲ့အနာဂတ်ဟာတောက်ပနေပြီး Leggreg ဟာ '87 နွေ ဦး ရာသီမှာအမဲလိုက်မတော်တဆမှုမှာပါ ၀ င်ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတယ်၊ သူကဒီခရီးစဉ်မှာနောက်ထပ်ပြေးရန်မျှော်လင့်မထားမှီလအနည်းငယ်အလိုတွင်သူသေသွားနိုင်သည်။ စက်ဘီးစီးခြင်းထက်အတွေ့အကြုံပိုနာကျင်စေသည်ဟုမပြောခဲ့ပါ၊ ၎င်းသည်စက်ဘီးစီးခြင်းအသံကိုအမှန်တကယ်ပြန်လည်နာလန်ထစေနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်သူသည်ကြွက်သားပေါင် ၃၀ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးသူသည်ကိုယ်၌အလုံးလေး ၄၀ ခန့်ကျန်ရှိနေသည်။ သူတို့ကိုငါးမျှားရန်ကြိုးစားသော်လည်းမဖြစ်နိုင်ရာကို ပြန်၍ လုပ်နိုင်သည်။ Greg သည်သူ့ခွန်အားကိုပြန်ယူပြီး၊ ပြန်ရှင်သန်ရန်၊ ရယ်မောရန်နှင့်ချစ်ရန်လုံလောက်ရုံသာမကနှစ်နှစ်အကြာတွင် 1989 de de France ကိုအနိုင်ရရန်လုံလောက်သည် သတ္တုအသေးစားများကိုထိုးဖောက်ကာသူသည်အခြေခံအားဖြင့်သူ၏ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများအားလုံးပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။
၎င်းသည်အားကစား၏သမိုင်းတွင်အကြီးကျယ်ဆုံးပြန်လာခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်အနည်းဆုံး ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင်အနိုင်ရခဲ့သည်။ ထိုစဉ်ကအမေရိကန်အငယ်တန်းစက်ဘီးအသင်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့သောဆယ်ကျော်သက်လန်းအမ်စထရောင်းအပါအ ၀ င်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ် Lance Armstrong အပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်ဟုသူကပြောကြားခဲ့သည်။ နောက်လာမည့် Greg Lamont သည် (၉၂) ကြိမ်မြောက်ခရီးစဉ်တွင် Greg သည်သူမနှင့်အတူအမှားတစ်ခုခုရှိသင့်သည်ဟုထင်သော်လည်း ဆက်လက်၍ လိုက်လံရှာဖွေရန်ကြိုးစားသော်လည်းစက်ဘီးစီးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မှားယွင်းခဲ့သည်။
testopone ဟော်မုန်းနှင့်သွေးသွင်းခြင်းကဲ့သို့သောစက်ဘီးစီးခြင်းတွင်допингသည်များသောအားဖြင့်ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ သို့သော်မြင်ကွင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်သောဆေးအသစ်သည်သွေးနီဥများပိုမိုများပြားလာစေရန်ကူညီရာတွင်ပိုမိုထိရောက်သောကြောင့်မြင်းစီးသူရဲများသည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ပြီး၊ Smallchain လက်စွပ်၊ ဆရာဝန်တစ် ဦး က Greg ကိုမကြာခဏ Lance Armstrong အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေစဉ် doping မပြုခဲ့လျှင်သူသည် Tour defrance ကိုနောက်တဖန်အနိုင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါဟုပြောခဲ့သည်။ ထူးဆန်းသည်မှာ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် Lance သည် Uci World Championship ကိုအကြီးအကျယ်အနိုင်ရခဲ့သည်။ နောက်တစ်နှစ်အကြာတွင်စက်ဘီးစီးခြင်း၏အနာဂတ်လာပုံရသည်။ ဂregနှင့်လှံနှစ် ဦး စလုံးသည် de de france တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းနှင့်လှံ gregda ၏ပြိုင်ပွဲသည်အဆင်ပြေစွာကြည့်ရှု။ ရုတ်တရက်ရန်ပွဲဖြစ်ခြင်းနှင့်အဆုံးသတ်သွားသည်။ Outgreg မကြာမီအနားယူတော့မည် ကြွက်သားပြorderနာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းယခုတွင်လူအများကယုံကြည်သည်မှာ peloton နှင့်အဆက်အသွယ်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်အလွန်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ သူသည်ထူးခြားသည့်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့သည်၊ သူသည် ၂၂ နှစ်သာရှိသေးသည်၊ ro နှင့်အားကစားကွင်း ၁၀ ခုကျင်းပနိုင်ရန်အတွက်ထိပ်ဆုံးအဆင့် ၁၀ အဆင့်သို့တက်နိုင်သော်လည်းအမှောင်ဖုံးလွှမ်းနေသောနေ့ရက်များသည်ရှေ့သို့ရောက်နေပြီ။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်သူအသက် ၂၅ နှစ်သာရှိသေးချိန်တွင်သူသည်သူ၏ဝမ်းဗိုက်အဆုတ်နှင့် ဦး နှောက်သို့ပျံ့နှံ့သွားသောအဆင့် ၃ ဆီးချိုရောဂါရှိကြောင်းသိလိုက်ရသည်။ ရုတ်တရက်သူ့ဘဝအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေသူ၊ orchiectomy ဦး နှောက်ခွဲစိတ်မှုနှင့် ၁၂ ပတ်ကြာ Has Has ဓါတုဆေးသွင်းကုသမှုခံယူခဲ့သည်။ သူကလုပ်ငန်းစဉ်သည် Tour de France ၏တောင်တန်းများအဆင့်ထက်ပိုမိုဆိုးဝါးသည်။ အလှည့်အပြောင်းတွင်စက်ဘီးစီးခြင်းကို ၅၀ ရာနှုန်းသာရှင်သန်နိုင်မှုနှင့်အတူပျော်ရွှင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ အလားတူအခြေအနေမျိုးနှင့်အမ်းစထရောင်းသည်လန့်စကားပြောချင်သောအခါသူရနိုင်လိမ့်မည်ဟုစာတစ်စောင်ရရှိခဲ့သည်၊ လန်းသည်စက်ဘီးကိုပြန်လည်ပတ်ရန်ပြန်သွားသောအခါ Lanzearmstrong ဖောင်ဒေးရှင်းကိုလည်းကင်ဆာရောဂါမှလွတ်မြောက်စေသော်လည်းသူသည်အခြားသူများအတွက်တိုက်ခိုက်နေသည်။ အဆင်ပြေပုံရသော်လည်းစက်ဘီးစီးခြင်းသည်ပြproblemsနာအချို့ရှိသည်။
Tour de France ကိုပယ်ဖျက်လုနီးပါးဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ပြိုင်ပွဲကအရမ်းခက်ခဲလွန်းတယ်၊ လူတွေဟာသေလုနီးပါးဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့သိထားလို့မဟုတ်ဘူး။ အသင်း ၇ ခုကကန်တာဒါမှမဟုတ်ကန်ထုတ်ခံလိုက်ရခြင်းကြောင့်စက်ဘီးစီးတာကိုကြည့်ရတာမကောင်းဘူး။ ဟေးငါတို့ယောက်ျားတွေလုံးဝမပတ်သက်ဘူး၊ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာ Lanc Armstrong က Tour de France ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ Dhey Cancer Go Yourself လို့ခေါ်တဲ့ပြန်လာတဲ့ဇာတ်လမ်းမှာကင်ဆာရောဂါပါလာတာမဟုတ်ပဲ Armstrong ကသူ့ကိုမထုတ်နိုင်ခဲ့ အခြားလူများထက်မိုင် ၅၀၀ ပိုမိုမြန်ဆန်သည့်စက်ဘီးစီးသည့်အနေဖြင့်ခရီးစဉ်ကိုယ်တိုင် Lanzen Armstrong ဇာတ်စင်စင်တာကိုရရှိရန်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအရှုပ်တော်ပုံ ၉၈ ခု၏အမှတ်တရများကိုပိတ်ပင်ရန်အလွန်ကံကောင်းခဲ့သည်။ လူကြီးတွေကိုဘာကြောင့်မေးခွန်းထုတ်ရတာလဲ။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ပုံပြင်၊ ကလေးငယ်တွေအပါအ ၀ င်ကင်ဆာရောဂါခံစားနေရသူအားလုံးကိုမျှော်လင့်ချက်ပေးတဲ့ကောင်လေးကိုဘာကြောင့်မေးရတာလဲ။ သူသည် Wheaties box တွင်ကြော်ငြာအရောင်းအ ၀ ယ်များနှင့်နယူးယောက်မြို့တော်ဝန် Rudy Giulian ကဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် Greg Lamont သည်မနာလိုမှုမရှိကြောင်း၊ သေလုနီးပါးအခြေအနေမှသူ၏ပြန်လာခြင်းမှာလုံးဝမှေးမှိန်သွားသည်။ လူတွေကတစ်ခါမှမကြားဖူးတဲ့အရာတစ်ခုကိုဖုံးကွယ်လို့မရဘူး၊ ဂreg lamont မနာလိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူကလူသိရှင်ကြားမပြခဲ့ဘူး၊ ဂရော့ဂ်သည်စက်ပြင်ဂျူလီယန်နတ်သမီးကသူ့ကိုလှံနှင့်ထိုးသည်ဟု dreged ပြောခဲ့သည်၊ သို့သော်ဂရက်သည်မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ ဒါဗက်စ်ကနောက်ပိုင်းတွင်လုံး ၀ ငြင်းပယ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဂယ်ဂိုသည် Lanc ၏ဆရာဝန်တစ် ဦး ကကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားပြီးနောက် Lanc ၏အားကစားလွှမ်းမိုးမှုအကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ စကားစမြည်ပြောဆိုစဉ်ဆရာဝန်က Lancs vo2 max Your vo2max သည်သင်၏သွေးစီးထဲသို့နို့ ထွက်၍ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စဉ်ကြွက်သားများသို့မည်မျှပေးပို့နိုင်သည်ကိုမတော်တဆဖော်ပြခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အားကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်ပါကမြင့်မားသော vo2max ရှိခြင်းသည်တော်တော်အရေးကြီးသည်။
ဂရက်ဂိုသည်အသက် ၉၃ နှစ်ဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်ကသူသည်အသက် ၇၈ နှစ်သာရှိသေးသည်ဟုဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ ၂၀၀၁ နွေရာသီတွင်ဖရန်စ်ဖရန့်စင်တာကိုအနိုင်ရနိုင်ကြောင်းသူကထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ ဂရက်နှင့်အခြားသူအားလုံးသည်ဗြိတိသျှဂျာနယ်လစ်ဒေးဗစ်ဝေါ့ခ်ျသည်အီတလီနှင့်လန်းစ်အားချိုးဖောက်သောဇာတ်လမ်းကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည် doctor michaele ferrari ferrari က epo ကကောင်းတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ သူကပိုများသော epo ၏အန္တရာယ်များကိုလိမ္မော်သီးဖျော်ရည်၏အန္တရာယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည် လိမ္မော်သီးဖျော်ရည်က ၀ မ်းလျှောသွားတယ်။ ဒီဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောမှုကိုလူသိရှင်ကြားပေါ်မူတည်တယ်။ သေတာထက်ပိုဆိုးနိုင်တယ်။ လာလိမ့်မယ်။ Lance Armstrong ကဒီကောင်လေးနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာဘာကြောင့်လဲ သူရေးသားတဲ့ဆောင်းပါးကိုချီးကျူးလိုက်တာက ၀ မ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲ။ သင်ဟာတာဝန်ရှိတဲ့စာနယ်ဇင်းသမားတစ် ဦး ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ Lsh ကကိုးကားချက်အတွက်ဂregကိုအပြင်းအထန်ရန်လိုတဲ့စကားမဟုတ်ဘဲတိုက်ရိုက်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ အမ်းစထရောင်းကိုမနှစ်သက်သောသူသည် greg ကိုမလွှတ်စေလိုပါ၊ အမှန်မှာသူသည် greg ဈေးနှုန်းအပြီးနှစ်ပတ်အကြာတွင် greg lamont ကိုကျော်သွားလိမ့်မည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။ လူတိုင်းသည်ဖုန်းပြောဆိုမှုကိုအလွန်ကွဲပြားစွာပြောကြသည်၊ greg ဟာနောက်ပိုင်းမှာ Pllamonde ကိုလုပ်မယ့်သူပဲလို့သူတို့ကိုခြိမ်းခြောက်ခဲ့တယ်။ Armstrong ကတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀၀ ပေးဖို့တောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ သူဟာဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၏ epoin lance ရဲ့ version ကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပေမယ့်သူဟာလေးစားမှု၊ မည်သူ့ကိုမဆိုခြိမ်းခြောက်။ greg သည်သူရဲကောင်းများဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုသည်။ ဟုတ်သည်၊ Lance ကဂရက်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲနေစဉ်အော်ဟစ်ငိုကြွေးသည်၊ ထို့ကြောင့်အခြားရက်များ၌ greg သည် lance ၏အဖွဲ့ ၀ င် lee der ceo ကိုထောက်ခံသည့် ၀ ီစကီနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်သည့်ဘောင်းဘီ ၀ ယ်သူအားဖုန်းခေါ်ခဲ့သည်။ အိမ်ခြံမြေကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ဥက္ကcompany္ဌဂျွန်ဘော့ဗ်သည်ခေါင်းလောင်းခလုတ်ခုံများကစက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်များစွာမသက်ဆိုင်ပါ။ သူဌေးကြီးက gance ကို lanceolate ပြောခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ပြောသော်လည်း၊ touchtrek တွင် greg နှင့်အတူသူ၏စက်ဘီးအမှတ်တံဆိပ် le mans cycle ကိုရောင်းခဲ့သော်လည်းသူတို့ကလှံကိုကမကထပြုလုပ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ခရီးသည်အလယ်တွင်ရှိနေပြီးအမှန်တရားမူများကို အခြေခံ၍ မည်သူထောက်မရမည်ကိုရွေးချယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်၊ greg အေးဆေးတည်ငြိမ်သော greg ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်ဤ bigwigs များကိုတိုက်တွန်းခဲ့သည်။ John သည်ဘာ့ဂ်၌ဂျွန်ဘာ့ခ်နှင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်တိုင်တောင်သူများသည် greg ၏ဆိုင်ကလုံးဆန်သောဆန့်ကျင်ရေးအသိုင်းအ ၀ ိုင်းနှင့် greg lamont နှင့်အတူလူအများရှေ့နေများနှင့်အတူလုပ်ခဲ့သည့်ပြdidနာကိုညွှန်ကြားခဲ့သည်။ တစ်လအကြာတွင် greg ထံမှတောင်းပန်စကားသည်ယနေ့ US တွင်ထင်ရှားသည်။ သူမတွေ့ဖူးသေးသော g reg မှတောင်းပန်စကားကိုသူစာရွက်ကောက်ယူချိန်တွင်ကိုးကားသည်သရဲများကရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူကသူ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့ဖူးသည်။ လန့်သည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ Greglamonde သည် Ostracized စက်ဘီးစီးခြင်းလောကမှအခြေခံအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ Gregor တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်ပြproblemsနာများရှိသည်ဟူသောကောလာဟလများပျံ့နှံ့သွားသည်။ သူတို့ကနောက်ပိုင်းတွင် Trek ကိုစာချုပ်ဖောက်ဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီး Lance အပေါ်စွပ်စွဲမှုများသည်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်မကောင်းသောကြောင့်သူတို့သည်သူ့ကိုတရားစွဲခဲ့သည်။
သုံးကြိမ်မြောက်အနိုင်ရရှိသူဖြစ်သောသူသည် Tour de France ၏နှစ် ၁၀၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲသို့တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့သော်လည်း Lance Lance ၏လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ဂရက်ဂရေ၏ကိုးကားချက်မှအကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်သူသည်အနိုင်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာသူ de n francer ကိုသူကလူတိုင်းကိုလှောင်ပြောင်သရော်လိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏မြည်းကိုခြောက်နာရီတစ်နေ့ခြောက်နာရီအချိန်တွင်အမြစ်တွယ်နေသည့်သူ၏စီမံချက်သည်အစိုးရအစီအစဉ်များကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့သောအစိုးရအစီအစဉ်များကိုသူကသူမထင်မှတ်သောအစိုးရအစီအစဉ်များကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ သူသည်ထိုခရီးစဉ်ကိုထပ်ခါတလဲလဲအနိုင်ရခဲ့သည်။ သူသည်သားရေဂျာကင်အင်္ကျီများ ၀ တ်ဆင်ခဲ့ပြီး၊ ချာလီသည်ရက်ကန်းလက်များဖြင့်တန်ဆာဆင်ထားသည့် yl ရှာမှဂျွန်ကယ်ရီအထိမိုက်ကယ်ဆော့ကတ်ထရားအထိလူတိုင်း၏လက်ကောက်ဝတ်ကိုအလှဆင်ထားသောအသားရေအကျီများ၊ la Confidentiallacycre de lance armstrong အမည်ရှိပြင်သစ်စာအုပ်ကဤခေါင်းစဉ်သည်လှံအတွက်သတင်းဆိုးများဟုဘာသာပြန်ဆိုထားသော်လည်းဤစာအုပ်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာမရှိခဲ့ပါ။ ပြင်သစ်သတင်းစာနှင့်အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် Lance Lancer's r ကိုရှင်းလင်းပစ်လိုက်သည်။ Lanc သည်ဆဌမ Tour de France အနိုင်ရခဲ့ခြင်းကြောင့်အလုပ်များခဲ့သဖြင့်သတင်းများသည်သူ့အတွက် Greg Lemon အတွက်သူ၏တိုက်ပွဲကိုစာနယ်ဇင်းများကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်သိပ်မကောင်းလှပါ။ သူပေးရင်သူတို့မပေးသင့်ဘူးလား။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် in ည့်သည်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသောဆေးရုံအခန်းတစ်ခန်း၌လျှို့ဝှက်စာအုပ်မှပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုသူတို့သက်သေပြရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ သူသည် Epogreg ကိုအသုံးပြုနေခြင်းမဟုတ်ဘဲသက်သေခံဆေးခန်းခန်း၌ Greg ည့်သည်များမဟုတ်ကြောင်းသက်သေပြရန်ကင်ဆာဆရာဝန်အားပြောကြားခဲ့သည်။ သူကသူနှင့်စကားပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး hetape ကသူ၏စပွန်ဆာပေးသူ stephaniemcilvenlances ၏စကားပြောမှုကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ Oakley ကသူမအခန်းထဲတွင်ရှိနေသည်ဟုသက်သေပြသော်လည်းလှံသည်ဆရာဝန်များအားသူက epo ကိုသုံးနေသည်၊ မသုံးသည်ကိုမပြောသော်လည်း၊ ငါလိမ်မပြောတာတွေပြောနေတယ်၊ ​​ငါအခန်းတွင်းမှာနေခဲ့တယ်။ ငါအဆင်ပြေသွားတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။ မုသားကိုမုဒိမ်းမှုနဲ့ထောင်ချမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမယ့်လှံအတွက်တော်တော်ဆိုးသွားတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ မင်းလန်းကိုမရဘူး၊ , အမှု၌မှလွဲ။ ခုနစ်ခုနှင့်တစ်နှစ်ခွဲအနိုင်ရခံရဖို့။ သူသည်သူ၏သတ္တမမြောက်ခရီးစဉ်အနိုင်ရခဲ့ပြီးငွေ၊ ကျော်ကြားမှု၊ ချစ်ခြင်းနှင့်လေးစားမှုများစွာရရှိခဲ့သည်။ သူသည် o5 ခရီးစဉ်အပြီးမကြာမီအနားယူခဲ့သော်လည်း ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်အမဲသားသည်အနားယူတော့မည်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
သူ၏စွပ်စွဲချက်များအပေါ်တုံ့ပြန်မှုသည်ယခင်ထင်ထားသည်ထက်ပိုမိုဆိုးရွားခဲ့သည်။ male သည် Lance ၏ပြန်လည်ပတ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီး vo2 max သည်မူးယစ်ဆေးဝါးစစ်ဆေးမှုတွင်မည်သို့ပါဝင်သင့်ကြောင်းပြောဆိုရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ တုံ့ပြန်မှုအရ Lance ကသူ့ကိုဖြတ်တောက်။ ကင်ဆာကဒ်ပြားကိုကစားခဲ့သည်။ မြင်ကွင်းတွင်သူမသည် Beeflance စင်တာတွင်စကားပြောမှုကိုထိန်းချုပ်သည့်မိုက်ခရိုဖုန်းတစ်လုံး၏ဥပစာစကားဖြစ်သည်။ လူသိများသောလူစုလူဝေးတွင်ကြားရရန်ရုန်းကန်နေရသော်လည်းကြိုတင်မမြင်နိုင်သောအမှောင်ထုများမှာလန်းအမ်းစထရောင်းအတွက်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းတွင်ရှိနေသည်။ သူသည်မိမိကိုယ်ကို doping ဖမ်းဆီးပြီးနောက်အသင်းဖော်ဟောင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးစွပ်စွဲချက်များကိုတိုက်ခိုက်မည့်အစားသူရဲကောင်း Landis သည်စာတိုက်အဖွဲ့၏စနစ်တကျ doping အစီအစဉ်ကိုတွေ့ခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဖက်, ဒါပေမယ့်သူသည်မိမိ G သည်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုအောင်မြင်စွာပုန်းအောင်းနေခဲ့စဉ်ကခြိမ်းခြောက်မှုဖြင့်ဖုံးကွယ်ထားသည့် Lance မှစာလုံးပေါင်းယူအက်စ်အေသည်သူ၏ Tour de ၇ ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသည့်အချိန်မှစတင်ခဲ့သည်။ ပြင်သစ်ဘွဲ့များနှင့်သူ့ကိုဘဝမှတားမြစ်ခဲ့သည်။ လန်းသည်သူ၏ဖောင်ဒေးရှင်းမှနုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးသူသည်စပွန်ဆာများဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်ကေသီ Lamont Gregor ၏ဇနီး၏သက်သေထွက်ဆိုချက်အရ doping သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းနှင့်နံရံကိုဆန့်ကျင်။ သူသွားရာလမ်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် သူ၏ရုပ်မြင်သံကြားဝန်ခံကာလအတွင်းထင်ရှားကျော်ကြားသည်။ အမ်းစထရောင်းကသူအားဂရက်အားတောင်းပန်ရမည့်အကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူသည်လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဆက်ဆံရေးကိုတိုးတက်အောင်မကူညီနိုင်ခဲ့သည်။ လအနည်းငယ်အကြာတွင်ဂရက်သည်သင်ထင်သည်မှာသူသည်သူရူးနေသေးသည်ဟုလူများအားလူသိများစေရန်သူ၏ကိုယ်ပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားအင်တာဗျူးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည် i US မှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကိုသွားထောင်သင့်တယ်
တရားရေးဌာနသည်အမ်းစထရောင်းကိုဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ အမ်းစထရောင်းသည်ဂရက်အားသက်သေခံခြင်းမှတားဆီးရန်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ သို့သော်သူသည်သူအားမုန်းတီးခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်ကိုမုန်းတီးသည်။ သို့သော်ယနေ့ကျွန်ုပ်မဆုံးရှုံးလိုသောငွေပမာဏမှာ Greg Lamont သည်စက်ဘီးစီးခြင်းအသိုင်းအဝိုင်းတွင်ပြန်လည်လက်ခံခြင်းခံရသည့်တစ်ခုတည်းသောအမေရိကန် Tour de France ဆုအတွက်တစ် ဦး တည်းဖြစ်သည်။ သူသည် Eurosport အတွက်လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည် doping လှံကိုတိုက်ဖျက်ရာတွင်သူရဲကောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ Armstrong သည် podcastokay ကိုအဆင်ပြေစွာပြုခဲ့သည့်အချိန်တွင် lance wasfoo ling al le gregthe livestrong ဖောင်ဒေးရှင်း မှလွဲ၍ မယုံနိုင်လောက်အောင်ငွေအမြောက်အများရရှိခဲ့သော်လည်းသင်သွားလျှင် livestrongfoundation ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုယနေ့သင်သည် lancearmstrong ၏သဲလွန်စများစွာကိုတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံပြင်၏ tabs များကိုနှိပ်လျှင်ပင် greg lemonade သည်ဤပျားကောင်၏အနိုင်ရသူဖြစ်သည်။ အားလုံးမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သော်လည်းဟုတ်သလား။ သူအသက်တာကိုမြှုပ်နှံသည့်အားကစားကြောင့်သူမုန်းတီးခံရသည့်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်သူသည် ၁၂ နှစ်ငရဲဟုခေါ်သည့်အချိန်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်မှန်နိုင်သော်လည်းအရှုံးပေါ်နိုင်သည်။ လန်းအမ်းစထရောင်းသည်လှည့်ပတ်နေသည့်အမဲသားကိုအနိုင်ရသူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် သူဟာမြင့်မားတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့နေပြီးသူ့ကိုယ်သူဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်။ ဆိုလိုတာကသူဟာနောက်ထပ်ထပ်မံကျဆင်းသွားခဲ့ရတယ်။ ဒီအမဲသားမှာအနိုင်ရသူမရှိပုံရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီအမဲသားဟာဒီအမဲသားဖြစ်လို့ဒီအဖွဲ့ကတကယ်မပြေလည်သေးလို့ပဲ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာလို့စာရင်းသွင်းရတာလဲ၊ ဘာလို့စာရင်းမသွင်းတာလဲ။ ကြည့်ရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်တစ်ယောက်ယောက်လာပြပါ့မယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပျော်ပါ
Floyd Landis သည်လန်းအမ်းစထရောင်းကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သလား။
အဆိုပါထုတ်ဖော်ပြောဆိုဆန့်ကျင်တရားစွဲဆိုမှုLandisလာသောအခါ 2018 ခုနှစ်တွင်အခြေချခဲ့သည်အမ်းစထရောင်း$5သန်းထုတ်ဆပ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။Landisထံမှန်းကျင် $ 1.1 သန်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်အမ်းစထရောင်းကျန်ရှိသောငွေများကိုသူ့ကိုယ်ပိုင် Continental အသင်းကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။Floyd'sပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းကခေါက်ခဲ့သော Pro စက်ဘီးစီးခြင်း။၂၀၂၀ မေလ ၂၁ ရက်
ဂျာမန်နှင့်ဆွစ်ဂျာမန်: အဝေးပြေးလမ်းမတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ် ဦး အတွက်အမည်ပြောင်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မြေယာ၊ အမြင့်အမြင့်ဂျာမန် landoese မှစွန့်ပစ်ထုတ်လွှတ်သည်။
Thesurname landisပထမရာစုကို Bedfordshire တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ၁၃ ရာစုတွင် Almaric de Landres သည် Bedfordshire နှင့် Buckinghamshire နယ်မြေများကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ သူရှိကြတယ်လို့Burgundy, France တွင်ပြင်သစ်စာလုံးပေါင်းနှင့်အတူ Lorraine တွင်ယနေ့ရပ်နေသည့်စကားလုံးဖြစ်သည်။
Floyd Landis သည် Tour de France ကိုမည်သည့်နှစ်ကအနိုင်ရခဲ့သနည်း။
Floyd Landis(၁၉၇၅ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်တွင်မွေးဖွားသည်) အမေရိကန်သည်ယခင်ကအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းပြိုင်ဆိုင်ကယ်သမားဖြစ်သည်။Landisမူရင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူသိများသည်အနိုင်ရသူ2006 ၏ပြင်သစ်နိုင်ငံ။ ထိုအချိန်ကဥရောပမဟုတ်သောတတိယအကြိမ်ဖြစ်လိမ့်မည်အနိုင်ရသူစွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ဆေးများအဘို့အပြုသဘောစမ်းသပ်မီ, ထိုအဖြစ်အပျက်ရဲ့သမိုင်း၌တည်၏။
Floyd Landis ရဲ့တန်ဖိုးကဘာလဲ။
Floyd Landis Net Worth:Floyd Landisသူသည်အမေရိကန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ယာဉ်ပြိုင်ဆိုင်ကယ်သမားတစ် ဦး ဖြစ်သည်အသားတင်ရကျိုးနပ်$3သန်း၏။
စဉ်တွင်လန်းအမ်းစထရောင်းမရှိတော့အတွက်ယှဉ်ပြိုင်စက်ဘီးစီးခြင်းသူနေတုန်းပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတဆင့်အားကစားနှင့်ချိတ်ဆက်အလွန်။ သူ၏လုပ်ငန်းများစွာထဲမှတစ်ခုမှာ Mellow Johnny's ဖြစ်သည်စက်ဘီး၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးမြင်းစီးသူရဲများ၏နေရာအဖြစ်သာမကလူမှုရေးစုရုံးရန်နေရာလည်းဖြစ်သော Austin ရှိဆိုင်ခန်း။သြဂုတ် ၁၁ 2020
အဓိပ္ပါယ်: မြေပိုင်ရှင်။Landisကောင်လေးတစ်ယောက်လိုနာမည်အလယ်အလတ်အင်္ဂလိပ်မူရင်းဖြစ်ပြီးအဓိပ္ပါယ်၏Landis'မြေပိုင်ရှင်' ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးနာမည် Landis ဘယ်လောက်များများပါလဲ?
နောက်ဆုံးအမည် Landis ဘယ်လောက်အဖြစ်များသည်? ဒါဟာ 19,913 ဖြစ်ပါတယ်thအများဆုံးကျင်းပခဲ့သည်မိသားစုအမည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်းအတာအပေါ်။ ၎င်းကိုလူ ၂၆၅,၃၆၈ ယောက်တွင် ၁ ယောက်ကမွေးဖွားသည်။ ၎င်းကို ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းသောအမေရိကရှိတွေ့ရှိရသည်Landisအသက်ရှင် ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်မြောက်အမေရိကတွင်နေထိုင်ပြီး ၉၄ ရာခိုင်နှုန်းသည်အင်္ဂလိပ် - မြောက်အမေရိကတွင်နေထိုင်ကြသည်။
Floyd Landis ဟာဘယ်တော့တောင်ပေါ်စက်ဘီးစီးတာကိုစတင်ခဲ့တာလဲ။
Landis သည်သူ ၀ င်ရောက်သောပထမဆုံးတောင်ကြီးတောင်ငယ်ပြိုင်ပွဲကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ 1993 ခုနှစ်တွင်သူသည်အမေရိကန်အငယ်တန်းအမျိုးသားချန်ပီယံသရဖူဆောင်းခဲ့သည်။ သူကတစ်နေ့တွင် Tour de France ကိုအနိုင်ရလိမ့်မည်ဟုသူငယ်ချင်းများကိုပြောခဲ့သည် အသက် ၂၀ တွင် Landis သည်တောင်ကြီးသမားတစ် ဦး အဖြစ်အချိန်ပြည့်လေ့ကျင့်ရန်တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူသည်မကြာမီပင်မာကျောမှုအတွက်ဂုဏ်သတင်းကိုထူထောင်ခဲ့သည်။
Landis Cyclery မှာဘယ်လိုအလုပ်ရမလဲ။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ရာထူးများအတွက်ငှားရမ်းပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှစျေးဝယ်ပါ။ လွယ်ကူ၊ အခမဲ့ခံစားပါ။ အဆင်ပြေ In-Store ကို Pickup ။ ထွက်ပြီးစက်ဘီးဖြင့်စူးစမ်း! Phoenix, Scottsdale နှင့်အခြားအရာများကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်ညာဘက်ဂီယာနှင့်ဆိုင်သောစက်ဘီးဖြင့်ရက်အနည်းငယ်သုံးရန်ထက် ပို၍ ကောင်းသောနည်းလမ်းမရှိပါ။
Floyd Landis သည် Tour de France တွင်မည်သည့်နေရာတွင်ပြီးစီးခဲ့သနည်း။
Landis သည် Phonak အသင်းမှပိုမိုကောင်းမွန်သောကန်ထရိုက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုရရှိပြီးနောက်ထိုနှစ်ကုန်တွင်အမေရိကန်စာတိုက်မှထွက်ခွာခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် Tour de France တွင် Landis သည်အထွေထွေအဆင့်တွင်အဆင့်ကိုးနေရာ၌ရပ်တည်ခဲ့ပြီးထိုအချိန်ကခရီးစဉ်တွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။